Abakhiqizi be-Glass cosmetic / Jar, abahlinzeki - China Glass Bottle / Jar Factory
Amabhodlela e-Amber Glass Lotion Pump angenalutho angenalutho anekhanda nekhanda elimnyama.
Isikrini sentambo, ukusebenza kahle kokufaka uphawu, akudingeki ukhathazeke ngokuchitheka kokuqukethwe. Encane futhi elula. Kulula ukuphatha, okuphelele ukuhamba. Kulula ukuyihlanza futhi isebenze kabusha. Ifanele ukugcwalisa ama-serum, okhilimu, ama-lotion, amafutha abalulekile, imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, ama-moisturizers neminye imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba.
30ml no-50ml ngokukhetha kwakho,
500ml engenalutho Shampoo Pump Amabhodlela Glass Refillable Bottle for Shampoo, Body Wash, Soaps, Lotions, Oils
Sebenzisa le nsipho yokuhambisa ukuze ubuyekeze ngokushesha indawo yakho yokugezela. Lesi sikhwama sensipho senziwe ngengilazi eqinile esobala enomzimba ocwebezelayo okulula ukuyibona, futhi nepompo yensimbi engenasici okulula ukuyisebenzisa ikunikeza inani elifanele loketshezi ngaso sonke isikhathi, kugcina itafula lakho lingcolile. Lesi sikhwama sensipho yengilazi eguquguqukayo ingahlanganiswa kalula nanoma imuphi umhlobiso okhona, futhi ingahlobisa noma yiliphi ikhona lekhaya lakho, kusuka ekhishini kuya kwikhawunta yokugezela ngisho nasendishini yakho yokuwasha. Sebenzisa ngezinsiza ezihlanganisiwe zengilazi ukudala isimo sesimanje nesilula esikhaleni sakho.
100 Empty Refillable Frosted Glass Pump Amabhodlela Isitsha F r Bath Shower Shampoo Hair-Conditioner Cleanser Makeup Liquids
I-shampoo yamahhala ye-BPA, i-lotion, umzimba oketshezi, ukhilimu, igwebu, i-shampoo nezinye iziqukathi.
Ibhodlela likhulu ngokwanele ukuthi lingalebulwa nge-shampoo, i-gel yokugeza, i-lotion yomzimba, njll.
Imikhiqizo yasekhaya esebenzisekayo nenenzuzo enkulu. Iyahlala futhi ingasetshenziswa isikhathi eside;
Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Glass Bottle Nge Spray Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo,